डाक्टर को हुन् ? सजिव भगवान अर्थात् हामी सबैले देख्ने भेट्ने असली भगवान । तर, आज जब संसार भौतिकवादबाट बढी प्रभावित भयो या भनौं पैसालाई भगवान देख्न थालियो, तब वास्तविक भगवान को हुन् भन्ने बिर्संदै गएका छन् । यहाँसम्म कि दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो बि एन्ड सी कलेज सम्बोधन पाउन एवम् पैसा लुट्न यतिसम्म तुत्छ भएर डाक्टर पढ्दै गरेका नेपाली चेलीमाथि यस्तो आरोप लगाए कि जुन एक मानिसले गर्नै सक्दैन । उनको त्यस्तो घृणित भनाईले के उनी मानिस नै हुन् या त के उनी मानसिकरुपमा स्वस्थ छन् त भन्ने प्रश्न पक्कै पनि उठेकै छ ।
राष्ट्र बनाउने र देशका अगुवा शेरबहादुर तामाङ एवम् गगन थापाले हचुवा भरमा डाक्टर बन्दै गरेका विद्यार्थीमाथि जे पायो त्यही बोल्दा त्यसले उनीहरुको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर किन सोच्न सकेनन् ? लाखौं ऋण धन गरेर भविष्यको जग हालिरहेका नेपाली चेलीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? उनीहरुको अभिभावकलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ? यति संवेदना पनि बुझ्न नसक्ने मानिसहरुको मानसिक स्वास्थ्यबारे कुरा उठाउन पाउने कि नपाउने ?
ल, म पो बङ्गलादेश पढ्छु, मलाई पो थाहा छ कि उनीहरुले बोलेको सरासर गलत हो । त्यहाँ झन् मिहेनत गरेर पढ्नुपर्छ । त्यहाँ झन बढी महिलाहरुलाई सम्मान गरिन्छ तर, जो नेपालमा छन्, जसलाई बङ्गलादेशको परिवेश थाहा छैन, उसले के सोच्छ ? पक्कै पनि ऊ नेता, ऊ व्यापारीले भनेको सत्य होला भन्ने सोच्दछ ।
केही दिन अघि छुट्टिमा बङ्गलादेशबाट आएर आफ्नो गाउँ गएको थिएँ । एकजना छिमेकीले सोध्नुभयो, ‘बाबु, अहिले कुन सालमा ? बङ्गलादेशमा त किन्न पाईन्छ रे सर्टिफिकेट, साल गुमाउनु पर्दैन होला है!’
अनि छेउमै रहेका अर्का छिमेकीले थपिहाले, ‘ए साँच्चै, तिमीसँगै जाने केटीहरू छन् कि छैनन् नि ? तिनीहरु चाहिँ कति बर्षमा पास हुन्छन् ?’
यी प्रश्नहरुको उत्तर कम्युनिष्ट पार्टीका नेतासँग मार्सी भात खाने हैसियत राख्ने प्रसाईंले दिने हैसियत राख्छन् ? माननीय शेरबहादुर र गगन थापाहरुले राख्छन् ? भीडले ताली पिट्छ भन्दैमा जे मनमा लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ ?
यी प्रश्नहरुको उत्तर केपी र प्रचण्डहरुले दिनुपर्छ । कि त उहाँहरुले प्रसाईंसँगको उठबसको लागि सार्वजनिकरुपमा माफी माग्नुपर्छ कि भूलवश गलत मनसाय भएको मान्छेसँग संगत भएछ भनेर । कि त भने प्रसाईंहरुको अभिव्यक्तिले नेपाली चेली र विद्यार्थीहरुको गुमेको प्रतिष्ठाको मूल्य चुक्ता गर्न सक्नुपर्छ । नत्र कुन नैतिकताले राष्ट्रको अभिभावक बन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ उहाँहरुले ?
यो त मेरो छिमेकीको प्रश्न मात्रै हो र बङ्गलादेशमा म जस्ता सयौं छन् । यहाँ दुर्गा प्रसाईं, गगन थापा र शेरबहादुर तामाङको जे पायो त्यहि भनाईले नेपाली सर्वसाधारणमा बङ्गलादेशप्रति नकारात्मक छाप त परेको छ नै, सिङ्गो बङ्गलादेशमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीको ईज्जतमाथि खेलवाड भएको छ । त्यसको भरपाई कसले गर्ने सरकार ? हाम्रो इज्जत, हाम्रो जीवनमाथि कसैले खेलवाड गर्न पाउँछ ? त्यसको क्षतिपूर्ति कस्ले दिन्छ सरकार ? के न्याय मरेकै हो त ?
अहिले तपाईंलाई कसैले नेपालको नाम चलेका शीर्ष स्थानका डाक्टरहरु को हुन् भनेर सोध्यो भने पक्कै पनि तपाईंको उत्तर डा. भगवान कोईराला, डा. गोविन्द केसी, आदि हुन्छ नै । तर तपाईलाई थाहा छ या छैन डा भगवान कोईराला, डा. गोविन्द केसी बङ्गलादेशमै पढेर डाक्टर हुनुभएको हो । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि बङ्गलादेशको पढाइमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन ।
अनि कोहि कोहि चाहिँ एनएमसीको रिजल्टको कुरा पनि गर्छन् । तर, वास्तवमा कुनै समय नेपालको रिजल्ट बिग्रन्छ त कहिले बङ्गलादेशको । तर, यति कुरा सत्य हो एम्बिबिएस् भनेको चानचुने कुरा होइन । तपाई जहाँसुकै पढ्नुस् पास हुनको लागि दिनरात मिहेनत गर्नै पर्छ । बङ्गलादेशमा सुरुसुरुमा भाषा बुझ्न अप्ठ्यारो महसुस भएतापनि त्यहाँको पढाइमाथि औंला उठाउने ठाउँ छैन । सन्सारको विश्वविद्यालयको सुचि हेर्ने हो भने पनि बङ्गलादेशका ढाका, चिट्टागङ्ग विश्वविद्यालय त्रिभुवन एवम् काठमाडौं विश्वविद्यालय भन्दा माथि नै रहेको पाईन्छ ।
(खनाल हाल बंगलादेशमा एमबिबिएस अध्ययनरत छन्)
माइला लामाले तिमीहरुले जस्तै देश लुटेर हिडेका त छैनन् नि, किन जेल हालेको ?
बाँच्नै गाह्रो भो, भन्नोस् अब कुन पार्टी रोजौँ ?
प्रचण्ड र विप्लवसित भेटका ती दुई क्षण
मैले चिनेको रेशम चौधरी
नेपाली समाजको रुपान्तरण र समाजवाद